AulaGEO, Geo အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသင်တန်းကမ်းလှမ်းမှု - Geofumadas
နိုဝင်ဘာ၊ 2019 AutoCAD-AutoDesk, Cartografia, cadastre, CAD / GIS ဆုံးမဩဝါဒပေး, အင်ဂျင်နီယာ, qgis
AulaGEO သည် Geo အင်ဂျင်နီယာပညာ၏ရောင်စဉ်ကို အခြေခံ၍ လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုအဆိုပြုချက်ဖြစ်ပြီး၊ Geospatial၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်စစ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်များတွင် modular လုပ်ကွက်များပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါနည်းစနစ်ဒီဇိုင်း "ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ" အပေါ်အခြေခံသည်, အရည်အချင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်; ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်လက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းများကိုလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လက်တွေ့အခြေအနေတစ်ခုတည်းနှင့်လက်တွေ့လေ့ကျင့်နေသည့်အရာကိုပိုမိုအားကောင်းစေမည့်သီအိုရီဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဖြင့်အာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
AulaGEO နည်းစနစ်သင်တန်း၏ထူးခြားချက်များမှာ -
သင်ဝယ်ယူထားသောသင်တန်းကိုသင်မကျေနပ်လျှင် 30 အာမခံချက်။
အင်္ဂလိပ်လိုရနိုင်သည်၊ အချို့မှာ 15 ဘာသာများထက်စာတန်းထိုးများပါရှိသည်။
အတိုင်းအတာကိုအကောင်းဆုံးရှင်းပြရန် AulaGEO ၏အယူအဆရေးရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဂရပ်များ၌မြင်နိုင်သည်။
၎င်းတွင်အမြင့်ဆုံးသီးသန့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲ (ArcGIS) နှင့်အခမဲ့ QGIS ဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အဆင့်မြင့်အဆင့်များ၌ html5 နှင့် Google Maps API ကို အသုံးပြု၍ မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းဖွံ့ဖြိုးမှုပါဝင်သည်။
ArcGIS 10 ဖြင့်ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်များ
ArcGIS Pro ကိုလွယ်ကူစွာလေ့လာပါ
အဆင့်မြင့် ArcGIS Pro ကိုလေ့လာပါ
QGIS + ArcGIS Pro ကို တူညီတဲ့သင်တန်းအတွက်အပြိုင်နည်းလမ်း
HML5 နှင့် Google Maps ကို အသုံးပြု၍ geolocation
Web GIS နှင့် ArcPy
Remote Sensing ကျွမ်းကျင်သူ
ခြစ်ရာမှ HecRAS နှင့်အတူရေလွှမ်းမိုးမော်ဒယ်
ArcGIS HecRAS နှင့် GeoRAS နှင့်ရေကြီးမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ပုံစံပြုခြင်း
Google Earth သင်တန်း
ဤသင်ခန်းစာရှိသင်တန်းများသည် GIS အသုံးချပရိုဂရမ်များတွင်အတွေ့အကြုံရှိသောအသုံးပြုသူများအဆင့်မြင့်သောအဆင့်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည် geospatial နှင့်မြို့ပြလုပ်ငန်းများဒီဇိုင်းအကြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Remote Sensing နှင့် Hec-RAS သင်တန်းများတွင် ArcGIS နှင့် QGIS ကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပါဝင်သည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေပြင်အနေအထား။ ဒီသင်ခန်းစာတွင်ဓာတ်ပုံများ သုံး၍ ဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအလုပ်လုပ်ရန် photogrammetric နည်းလမ်းများရှင်းပြချက်များပါ ၀ င်သည်။ သင်တန်းတွင် AutoDesk Recap, Regard3D, MeshLab, SketchFab နှင့် Bentley ContextCapture တို့ကိုအလားတူသို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်သည့်အလုပ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ Civil3D ဖြင့် point облများသုံးပြီးမျက်နှာပြင်များဖန်တီးပေးခြင်း။
မြို့ပြ 3D အဆင့် 1 ။ ဤပထမအဆင့်တွင် Point များ၏စီမံခန့်ခွဲမှု၊ မျက်နှာပြင်နှင့် Align လုပ်ခြင်းတို့ကိုပါ ၀ င်သည်။
မြို့ပြ 3D အဆင့်2။ မျက်နှာပြင်များ၊ ကန့်လန့်ဖြတ်မျဉ်းများနှင့် volume Cube ကိုအလုပ်လုပ်သည်။
မြို့ပြ 3D အဆင့်3။ ဒီနေရာတွင် align များကိုပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအဆင့်များအပြင်မျက်နှာပြင်များနှင့် cross section များနှင့်တွေ့နိုင်သည်။
မြို့ပြ 3D အဆင့်4။ ငါ linear အကျင့်ကိုကျင့်အတွက် esplanades, သန့်ရှင်းရေးရေနုတ်မြောင်း, ကွက်များနှင့်လမ်းဆုံနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။
CAD - Excel နှင့်အတူ GIS အဆင့်မြင့်နှင့် macros များ။
လျှပ်စစ်သံလိုက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ BIM ကျွမ်းကျင်သူ
Revit Mep. ဤတွင်လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့်ရေပိုက်စနစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြေခံအဆောက်အအုံဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုး၏တပ်ဆင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည်။
Hydrosanitary စနစ်များ. ဤသင်တန်းသည်အဆောက်အ ဦး တစ်ခု၏ရေအားလျှပ်စစ်သန့်ရှင်းရေးပတ် ၀ န်းကျင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၊ ၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုများနှင့်နောက်ဆုံးစီမံကိန်း၏မျိုးဆက်များအားသုံးဖက်မြင်တည်ဆောက်ခြင်းအပေါ်တစ်ဆင့်ချင်းအဆင့်ဆင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်စနစ်များအတွက် MEP Revit.
လျှပ်စစ်သံလိုက်စနစ်များအတွက် MEP Revit ။ မကြာမှီလာမည်။
ပိုက်စနစ်များအတွက် MEP Revit ။ မကြာမှီလာမည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအင်ဂျင်နီယာ BIM ကျွမ်းကျင်သူ
AutoDesk Revit နှင့် CSI ETABS ဟူသောဆော့ဝဲလ်လိုင်းနှစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံတွင်ဤပုံစံတွင်ပါဝင်သည်။
Revit ဖွဲ့စည်းပုံကိုအသုံးပြု။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်း
ETABS တွင်ဤကမ်းလှမ်းချက်မှာ -
ETABS ဖြင့်အဆင့် ၁ ငလျင်ဒဏ်ခံအဆောက်အအုံဒီဇိုင်း၊ အဆင့် ၁ ။
CSI နှင့် ETABS ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းအထူးပြု။
ETABS နှင့်အတူဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပန်းရံ။ မကြာမှီလာမည်။
Revit နှင့်အတူဗိသုကာဒီဇိုင်း BIM အခြေခံမူ
BIM နည်းစနစ်၏ပြီးပြည့်စုံသောသင်တန်း။ ဤသည် BIM နည်းစနစ်၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့ကျသောအယူအဆများကိုအကျုံး ၀ င်သော 4D နှင့် 5D ရှုထောင့်များအပါအ ၀ င်ဘတ်ဂျက်နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံရိပ်ဖော်များပါဝင်သည်။
Navisworks သုံးပြီး BIM 4D ။ မကြာခင်မှာပဲ။
ဤသင်တန်းများသည် ETLS ကိုဖန်တီးရန်ကုဒ်အချို့ကိုမသိရှိခြင်းကြောင့်မြင့်မားသောဒီဇိုင်းအတွက်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်မြင့်သူများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။ ထို့ကြောင့် pseudocodes, Ansys နှင့်ပရိုဂရမ်ဆိုင်ရာယုတ္တိဗေဒကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင်တန်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိသောဒြပ်စင်များနှင့်ဂျီ ometric မေတြီဒီဇိုင်းနှင့် Dynamo အကြား BIM စီမံကိန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
Ansys Workbench နှင့်အတူဒီဇိုင်း
Nastran သုံးပြီးဒီဇိုင်းနှင့်စက်မှုခြင်း simulation ။ မကြာမှီလာမည်။
CREO နှင့်စက်မှုဒီဇိုင်း။ မကြာမှီလာမည်။
MatLab သုံးပြီးဒီဇိုင်းနှင့်ခြင်း simulation ။ မကြာမှီလာမည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် AulaGEO သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာအသစ်ဖြစ်ပြီး Geo-Engineering ၏ရောင်စဉ်ကိုအထူးပြုသည့်အထူးသင်တန်းများဖြစ်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်း၊ BIM နှင့် Geospatial စီမံကိန်းများအတွက်သင်တန်းများပါ ၀ င်သည်။
သင်တန်းအားလုံးBIM သင်တန်းများလုပ်ငန်းအသွားအလာသင်တန်းများမြို့ပြလုပ်ငန်းသင်တန်းများအဝေးမှအာရုံခံသင်တန်းများGIS သင်တန်းများ
#BIM - ETABS နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာအထူးပြုသင်တန်း
ETABS ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ကရစ်အဆောက်အ ဦး များ၏အခြေခံအယူအဆများသင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်တန်းသားများကိုအခြေခံကိရိယာများပေးရန်ဖြစ်သည်။
#BIM - တည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာပညာအတွက် ETABS သင်တန်း - အဆင့် ၁
အဆောက်အအုံများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်း - အဆင့်မြင့်အဆင့်တွင်အဆင့်သုည။ သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသင်တန်းသားများကို ...
ငလျင်ဒဏ်ခံအဆောက်အအုံများအား CSI ETABS ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း - သင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ...
အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအတွက် Revit နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သည့်အချက်များဤသင်ခန်းစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားပေးအပ်ရန်အာရုံစိုက်မည်။
အဆောက်အ ဦး ဒီဇိုင်းကိုရည်ရွယ်ဆောက်လုပ်ရေးသတင်းအချက်အလက်မော်ဒယ်နှင့်အတူလက်တွေ့ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်။ သင်၏ရေးဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ...
အဆောက်အ ဦး များ၏တည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းအတွက် Revit, Robot Structural Analysis နှင့် Advance Steel တို့ကိုအသုံးပြုရန်လေ့လာပါ။ ဆွဲ၊ ဒီဇိုင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင် ...
#BIM - Revit MEP သင်တန်း (စက်ပြင်၊ လျှပ်စစ်နှင့်ရေပိုက်ပြင်)
သင်၏ System ပရောဂျက်များကို Revit MEP ဖြင့်ဆွဲ။ ဒီဇိုင်းဆွဲပါ။ BIM (ဆောက်လုပ်ရေး ... ) ဖြင့်ဒီဇိုင်းကွက်လပ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ
အဆင့်မြင့်သံမဏိဒီဇိုင်းဆော့ဝဲလ်ကို အသုံးပြု၍ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းကိုလေ့လာပါ။ အပြည့်အဝဖောင်ဒေးရှင်းအဆောက်အအုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ၊ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာတိုင်များထုပ်များ၊ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ...
#BIM - Revit MEP ကို ​​အသုံးပြု၍ ရေနှင့်ဆိုင်သောစနစ်များ
သန့်ရှင်းရေးတပ်ဆင်မှုဒီဇိုင်းအတွက် REVIT MEP ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။ Revit MEP ဖြင့်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်းကိုကြိုဆိုပါသည်။
#CODE - BIM အင်ဂျင်နီယာစီမံကိန်းများအတွက် Dynamo သင်တန်း
BIM ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းဤသင်တန်းသည်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Dynamo ကို အသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းလောကအတွက်ဖော်ရွေခြင်းနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်းလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်။
#CODE - ပရိုဂရမ်နိဒါန်းသင်တန်း
ပရိုဂရမ်လေ့လာရန်၊ ပရိုဂရမ်၏အခြေခံ၊ flowcharts နှင့် pseudocodes, scratch မှပရိုဂရမ်းမင်းလိုအပ်ချက်များ - ဗဟုသုတသင်ယူလိုသည်။
#CODE - Ansys workbench သုံး၍ ဒီဇိုင်းသင်တန်းမိတ်ဆက်
ဒီအကြီးအကနျ့ဒြပ်စင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအစီအစဉ်တွင်စက်မှု Simulator ကိုဖန်တီးရန်အခြေခံလမ်းညွှန်။ အင်ဂျင်နီယာများပိုများလာတယ် ...
#GIS - ArcGIS 10 သင်တန်း
GIS ကိုသင်ကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ ArcGIS 10 ကိုသင်ကနေစပြီးသင်ခန်းစာယူနိုင်ပါတယ်။ ဤသင်တန်းသည် 100% ဖြစ်သည်။
#GIS - ArcGIS Pro သင်တန်းကိုအစကတည်းကကြည့်နိုင်သည်
ArcGIS Pro Easy ကိုလေ့လာပါ။ ပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်၏ဝါသနာရှင်များအတွက်ရည်ရွယ်ထားသောသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
#GIS - အဆင့်မြင့် ArcGIS Pro သင်တန်း
ArcMIS အစားထိုးထားသော ArcGIS Pro - GIS ဆော့ဝဲလ်၏အဆင့်မြင့်အင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုရန်လေ့လာပါ။ အဆင့်မြင့်အဆင့်ကိုလေ့လာပါ။
#GIS - ArcGIS Pro နှင့် QGIS3သင်တန်း - အတူတူပင်တာ ၀ န်များရှိသည်
ပရိုဂရမ်နှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြု၍ GIS ကိုလေ့လာပါ၊ တူညီသောဒေတာပုံစံနှင့်အတူလေ့လာပါ။ သတိပေးချက် QGIS သင်တန်းကိုစပိန်ဘာသာဖြင့် ...
#GIS - Android အတွက် Geolocation သင်တန်း - html5 နှင့် Google Maps ကိုသုံးသည်
#GIS ရေလွှမ်းမိုးမှုပုံစံ - HEC-RAS
အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဖြင့်ရေကြီးမှုနှင့်ရေကြီးမှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း - HEC-RAS HEC-RAS သည်စစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာကော်ပိုရေးရှင်း၏အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
#GIS - HEC-RAS နှင့် ArcGIS ကိုအသုံးပြုပြီးပုံစံချခြင်းနှင့်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းဆန်းစစ်ခြင်းသင်တန်း
ချန်နယ်မော်ဒယ်နှင့်ရေလွှမ်းမိုးသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက် Hec-RAS နှင့် Hec-GeoRAS တို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုရှာဖွေပါ။
#GIS - QGIS ၃
QGIS3၏သင်တန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သုညမှစ။ အလယ်အလတ်အဆင့်အထိရောက်သည်အထိအဆုံးထိအဆုံးသတ်ပါမည်။
#GIS - QGIS နှင့်အတူပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်များ
QGIS ကိုအသုံးပြုပြီးပထဝီဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်စနစ်များကိုလက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများမှတဆင့် QGIS ကိုအသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။ - သင်လေ့ကျင့်နိုင်သမျှသင် ...
#LAND - လူထုအခြေပြုလုပ်ငန်းများအတွက်မြို့ပြ 3D သင်တန်းအဆင့် - ၁
ပွိုင့်များ, မျက်နှာပြင်များနှင့် align ။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့်သက်ဆိုင်သော Autocad Civil3D software ဖြင့်ဒီဇိုင်းများနှင့်အခြေခံ linear လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖန်တီးရန်လေ့လာပါ။
အသင်းတော်များ, မျက်နှာပြင်များ, Cross- အပိုင်း, Cube ။ Autocad Civil3D software ဖြင့်ဒီဇိုင်းများနှင့်အခြေခံ linear လုပ်ငန်းများကိုဖန်တီးရန်လေ့လာပါ။
အဆင့်မြင့် align, မျက်နှာပြင်, cross section ။ Autocad Civil3D software ဖြင့်ဒီဇိုင်းများနှင့်အခြေခံ linear လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖန်တီးရန်လေ့လာပါ။
အဆင့်, သန့်ရှင်းရေးရေနုတ်မြောင်း, ကှကျ, လမ်းဆုံ။ Autocad Civil3D software ဖြင့်ဒီဇိုင်းများနှင့်အခြေခံ linear လုပ်ဆောင်မှုများကိုဖန်တီးရန်လေ့လာပါ။
#LAND - Google Earth သင်တန်း။
စစ်မှန်တဲ့ Google Earth Pro ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါပြီ။ ဒီပရိုဂရမ်ဟာအခုအခမဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပါ။ တစ် ဦး ချင်းစီ၊ ပညာရှင်များ၊ ဆရာများအတွက် ...
#LAND - Remote Sensing သင်တန်းနိဒါန်း
ဝေးလံခေါင်သီသော sensing ၏စွမ်းအားကိုရှာဖွေပါ။ အတွေ့အကြုံ၊ ခံစားမှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်မြင်တွေ့နိုင်မှုကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။
#LAND Digital Terrain Model - AutoDesk Recap နှင့် Regard3D
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ရုပ်ပုံများမှဒစ်ဂျစ်တယ်မော်ဒယ်များကိုဖန်တီးပါ။ ဤသင်ခန်းစာတွင်eကိုဖန်တီးရန်သင်လေ့လာလိမ့်မည်။
အောက်ပါအစုစုတွင် software နှင့်စည်းကမ်းချက်များအတွက်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
ယခင် Post မှ« Previous Plex.Earth Timeviews သည် AEC ပညာရှင်များအား AutoCAD အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များကိုပေးသည်
Next Post FES သည် GeoSmart India တွင်အိန္ဒိယလေ့လာရေးခရီးကိုစတင်ခဲ့သည်နောက်တစ်ခု»
၃ "Geo-engineering ပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသင်တန်းကမ်းလှမ်းမှု AulaGEO" ကိုပြန်လည်ဖြေကြားမှုများ
ဖာနန်ဒို Guasco Devereux သူ says:
ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 ပု
သူတို့ကအောက်ပါအကြောင်းအရာများအပေါ် 2017 များအတွက် Cadastre များအတွက်သင်တန်းများ, အခြေခံနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မြေမျက်နှာသွင်ပြင်, GIS နှင့်အဘိုးပြတ် Cadastral အခြေခံမြေပုံအခြေခံ GIS, GIS Spatial based နှင့်အာကာသအခြေစိုက်က်ဘ်ဆိုက်စီစဉ်ထားလျှင်ငါ့ကိုပြောပြရန်အဖြစ်ဤဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှု, နယ်မြေရောဂါ, ဖွံ့ဖြိုးရေး OT စီစဉ်ထားပါတယ်။
ဇူလိုင်လ 2014 ပု
ငွေပေးချေမှု၏ပုံစံများကိုဘဏ်ငွေလွှဲ, Paypal သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဟိုဆေး Monroy Heriberto Aguilar သူ says:
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ, နှုတ်ခွန်းဆက်စကား, စျေးနှုန်းများနှင့်ပထမဦးဆုံးမော်ကျူးပြီးနောက်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပတ်သက်. consultaes ။ အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။